Shiinaha oo Jawaab adag ka bixiyay hadal ka soo yeedhay Maraykanka
Home WARARKA Shiinaha oo Jawaab adag ka bixiyay hadal ka soo yeedhay Maraykanka
Wasaraadda arrimaha dibedda ee Shiinaha ayaa sheegtay in Beijing ay ka go’antahay inay “difaacdo xaquuqdeeda lahaanshaha deegaandaasi”.
” Haddii jasiiradahaasi ay ku dhexyaalaan biyaha caalamiga ah oo aanu Shiinuhu si gaar ah u lahayn waxaan hubin doonaa in aan la qaadanin”, ayuu yidhi afhayeenka Aqalka Cad oo aan faahfaahin dheeraad ah bixinin.
Shiinuhu wuxuu sheegay in Mareykanku uaanu qeyb ka ahayn dhinacyda isku haysto Koonfurta badda Shiinaha.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibedda ee Shiinaha, Hua Chunying ayaa sheegay in Shiinuhu ay ka go’antahay in dalalka ay khuseyso muranka lahaanshaha badda uu wadahdal kala yeesho arrintaasi. Wuxuu intaasi ku daray in Mareykanku aanu ka tirsanayn dalalkaasi.
Previous articleU Hiili Naftaada WQ Hibo Ciise Maxamed
Next articleWasirka Ganacsiga Iyo Maalgashiga Ayaa Soo Dhaeweeyay Shirkada Cusub Ee Dalka Maalgashatay